Ulawulo olukude lwePen entsha ye-Galaxy Qaphela i-9 iya kuhambelana nezinye izicelo | I-Androidsis
Enye yezinto ezinqabileyo ezitsala umdla omkhulu ngexesha lokwenziwa ngokusemthethweni kwe-Samsung Galaxy Note 9 yayiyi amandla olawulo olukude akhelwe kwi-S Pen, into ebikhe yahletywa kodwa yaqinisekiswa ngexesha lokuboniswa. I-S Pen entsha ibandakanya i-chip yeBluetooth esinokuthi sidlale ngayo okanye simise umculo kunye neevidiyo, senze iintetho kwaye sithathe imifanekiso.
Uluhlu lweli S pen limalunga neemitha ezili-10 kwaye kungekudala siza kuba nakho yisebenzise kolunye usetyenzisoNjengoko inkampani yaseKorea ibhengeze ukuba iya kubonelela ngabaphuhlisi i-SDK ukuyenza ukuba ihambelane nezicelo zabo. Ukuba uphoswe kukwazi ukwandisa imisebenzi yePen S, unethamsanqa.
Lo msebenzi mtsha umiselwe kuphela kwiqela elincinci kakhulu lezicelo ezifumaneka ngokwendalo kwiGlass Qaphela 9. Kubonakala ngathi inkampani yaseKorea ibonile ukuba lomsebenzi omtsha unokuba ezinokubakho kwezinye iinkqubo okanye ibe ngabaphuhlisi ngokwabo abacele ukuba i-Samsung ibonelele ngokufikelela kwi-SDK ukuze ikwazi ukuyiphumeza kwizicelo zabo.
Lo msebenzi unokuba ulungele abo basebenzisi abadibanisa ii-smartphone zabo rhoqo kwi-TV ukuze bakwazi Yonwabela iNetflix, iHBO okanye iVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon. Ukuba amathuba ongezelelweyo eS Pen ayasetyenziswa kwezi zicelo, sinokuba nohlobo lweChromecast ngokupheleleyo simahla, into eya kuthi ngokungathandabuzekiyo bayithande aba basebenzisi.
Ukudibana kweS Pen kunye nezicelo yenziwe ngeqhosha elibekwe ecaleni. Kuxhomekeka kwinani lamaqhosha esiwenza kuwo, usetyenziso lusinika umsebenzi omnye okanye owahlukileyo. Okwangoku, ukuba ungumsebenzisi we-Galaxy Note 9, kuya kufuneka ube nomonde kwaye ulinde ukubona ukuba zeziphi ezizezokuqala ezihambelanayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Ulawulo olukude lwePen entsha ye-Galaxy Qaphela i-9 iya kuhambelana nezinye izicelo
Nceda abahlobo bakho babaleke ngokudweba imigca ekubalekeni kwePixel
Uyisusa njani iakhawunti yakho kaGoogle yokufikelela kwiiapps, imidlalo kunye nezixhobo ezixhunyiwe